Isingabate Sabata Dispenser Commercial
musha / zvishongedzo / Bathroom accessories / WOWOW Isina Touchina Sipo Dispenser Yekutengesa
WOWOW Isingagadzi Sipo Dispenser Inotengeserana
The otomatiki sensor seseji disenser inogona otomatiki uye nekuwanda kushambidza ruoko yekushambidza mvura kana ichigeza maoko, uye inogona kushandisa sipo mvura kuchenesa maoko pasina kubata, iri nyore chaizvo uye hutsanana.
Isingabate Sabata Dispenser
Nekuda kwemapundu, sekubuda kweCCIDID-10 semuenzaniso, tinoziva kuti hutano hwedu husina kusimba uye tinofanirwa kugara tichitarisira hutsanana hwedu kuti husatapukirwe. Uye kwete kutapurira vamwe. Kunyanya munzvimbo dzeveruzhinji, isu tinofanirwa kuziva zvizere nezvehutsanana, uye zvishandiso zvinofanirwa kupihwa kudzivirira hutachiona kana hutachiona kuti husapararire. Zvinhu zvinogunzirwa kazhinji, kunge doorknobs uye faizets, zvinofanirwa kucheneswa kuti zvirambe zvisina hutachiona. Uye panguva yepipiki unofanirwa pamusoro pese kudzivirira kubatana maoko. Asi pamusoro pezvose, zvakakosha kushambidza maoko ako kazhinji. Sezvaunoshamba maoko ako kazhinji, mabhakitiriya ane shoma shoma yekuparadzira uye kuita kuti mumwe munhu arware kana kutapukirwa nehutachiona.
KuWOWOW isu tine hanya nezvehutano uye zvese zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa zvakagadziriswa nehutano hwako sechinangwa chikuru. Ndokusaka isu takagadzira iyi isingabati sipo disenser kuti ikupe nyaradzo izere uye nzira yevashandi vako nevatengi, uye nenzira yakachengeteka yekumisa hutachiona uye hutachiona kubva pakupararira.
Isingabatike sipo inosvina ne infra-red sensor
Munzvimbo dzinowanikwa veruzhinji iwe unoda kudzivirira kubata chero chinhu nemaoko asina chinhu kuti udzivise kubatana nehutachiona. Ndokusaka WOWOW inopa iyi isingagadzike sipo disenser ne infra-red tekinoroji. Paunobata maoko ako pasi peiyi isina disenser disenser, uchagashira chikamu chakaringana chesipo mumaoko ako, pasina kana chekubata. Mukubatanidza netsiva risingabate, unogona kushambidza maoko ako zvakachengeteka, pasina kuita chero matipi akaomarara kuti usabata chero chinhu.
WOWOW's handless sabhuku disenser inogona kushandiswa munzvimbo dzakasiyana-siyana, kunge zvimbudzi kana makicheni, mune semuenzaniso zvivakwa zvehofisi, zvipatara, mabhangi, nzvimbo dzekutengesa pamwe nedzimwe nzvimbo dzakawanda. Iyi isipo isina sipo yekuwachisa yaigadzirwa nemhando yepamusoro yekushandisa kuitira kuti igare munzvimbo dzeveruzhinji. Kunyangwe kuishandisa-yakaoma ruoko rweasina kugunzva sipo yekugovera inogona kubatwa nyore. Kwete pasina chero akawanda emakambani epasi rese haver aivimba neasina kugunzva sipo dispenser yeWOWOW kudzora kubuda kweCCIDID-19.
Multifunctional isingabate sipo disenser
Zvikurukuru iyi isipo isina sipo yekubvisa yaigadzirwa sipo. Asi iwe unogona kushandisa chero rudzi rwemvura mune ino infra-red sensor disenser. Iwe unogona kunge uchizadza ne disinfectant, ruoko sanitizer, dishwashing fluid, kana kunyange sunscreen. Iwe unogona kupawo maviri maviri asina magetsi emidziyo, semuenzaniso rimwe nesipo paruoko uye rimwe riine hutachiona. Mune izvi iwe unopa kunyaradza kwakanyanya kune ako vatengi uye vashandi. Zvirinani unogona kuvimba kuti urikuita zvese zvaunogona kuyedza kudzivirira chirwere chetachiona nemabhakitiriya kuti asapararire.
Iyi isipo isina sipo yekuparadzira yakatanga kuitirwa zvekutengesa. Nekudaro, iwe unogona kuisa ino automated disenser kumba kwako zvakare. Sezvo iwe uchida kuti mhuri yako ive yakachengeteka uye ine hutano, neiri isinga gadzirirwe sipo yekuwachisa, iwe unogona kuita izvi kunyange nyore. Pamwe unouzadza nesipo, kana ne disinfectant, zvinoenderana netsika dzako. Sezvo seanogadzira sipo yekuwachisa iine minimalistic dhizaini, inogona kukwana mune chero kicheni kana yekugezera. Iyo inopa kunyange yakanaka kubata tekinoroji yemazuva ano mukicheni yako kana yekugezera usinga gare nzvimbo yakawanda.
Dhizaina isingagadzi sipo yekuwachisa
Isingabatike sipo yekuwaridza yeWOWOW iri nyore uye nehutsanana sezvo iwe uchigona kushambidza maoko ako pasina kubata chero chinhu paunenge uchishandisa sipo kana ruoko sanitizer. Kunze kwezvo, iri risingaputi sipo disenser ine otomatiki sensor ine yakafara uye compact dhizaini. Haingochengetedze nzvimbo chete, asi zvakare chinhu chakanakisa dhizaini munzvimbo mbiri dzeveruzhinji sewe mune yako imba. Iyi isingagadzi sipo yekuparadzira ichanyatsobatsira kumifananidzo yako yekambani sekambani yemazuva ano iyo ine hanya nevatengi vayo, vashandi uye hutano.
Kunze kwekugadzira, WOWOW yakafungawo zvakanaka nezve mashandiro eaya asinga goni sipo yekuwachisa. Iyo nyore yekushandisa ndeyechokwadi yekutanga mukana weiyi automated disenser. Asi pane asingabati sipo vanogovanisa dambudziko rakakura nderekupa huwandu hwemvura chaiyo, pasina zvinoshatisa. Iko kugovera vharuvhu yeWOWOW isingagadzi sipo yekuwachisa inogadzirisa huwandu hwemvura uye inodzivirira kudonha. Naizvozvo iyo isingagadzi sipo yekuparadzira iyo yeWOWOW inobatsira iwe kudzivirira hutachiona kuti husatapuririke pakuzadzikiswa kwevatengi, uye pasina kuraswa.
Mushandisi-ane ushamwari asina kubatisisa sipo yekuwachisa WOWOW isingabate sipo yekuburitsa sipo inopa dhiri-yemagetsi dhizaini, sezvo inogona kuchinjirwa nemabhatiri kana DC simba. Izvi zvinoita kuti isinga gadziriswe sipo yekushandisa inoshoreka-inosevenza uye inogona kuiswa nekukasira, kunyangwe isina madziro kubuditsa pedyo. Iwe unongodhonzera gomba diki mune iro dhizaini, uye iwe unogona kuisa ino isingagadzi sipo yekugovera pasina kunetsekana. Pasi pekicheni yekugezera kunyura unogona kutsiva mvura inowanikwa zviri nyore, uye haioneke kune chero munhu. Nenzira iyi esthetics haina kukuvadzwa mune chero nzira uye iwe unogona kupa sevhisi yakazara neiyi minimalistic isingabate sipo disenser.
Sezvimwe zvese zvigadzirwa zvayo, WOWOW inoshandisa inoshanda yepamusoro-tech matekiniki ekupa yepamusoro zvigadzirwa. Uye nekuda kwekushandisa kwayo kwakanaka uye nemaitiro akanyanya kugadzirwa ekugadzira, WOWOW inogona kupa ichi chisina hunyanzvi sipo dispenser nemutengo unonzwisisika. KuWOWOW tinodada nezvigadzirwa zvedu uye nemhando yatinopa kune vatengi vedu kubva pasi rese. Naizvozvo tine chivimbo chekukupa iwe yemakore mashanu-akazara waranti nguva. Kana muridzi wako wesipo asingagone kuita senge iwe waunotarisira kuti uite, isu tichadzosera sipo yako isingabati chero dambudziko.
Kunze kwezvo, WOWOW inopa 90-zuva rekudzoserwa mari vimbiso. Kana iwe usingade ichi chisina kugunzva sipo dispenser nekuda kwechimwe chikonzero, isu tinongozokudzosera iwe pasina mibvunzo yakabvunzwa. Nenzira iyi iwe unogona kutora ino yepamusoro infrared sensor tekinoroji kuti udzivise sekondari kutapukirwa chirwere pasina njodzi zvachose. Wakamirira chii?
Ndapota taura nesu kana iwe uchida kuraira yakakwira yakawanda yeasina kugunzva sipo dispenser kuti akupe iwe mutero.
Izvo zvakanakira zveasina kubatisisa sipo yekugovera muchidimbu:
• Yepamusoro-tech infrared tekinoroji
• Inogona kuzadzwa nesipo, disinfectant kana ruoko sanitizer
• Dhizaini yemazuva ano
• Kuita kwepamusoro
• Zvese zviri zviviri zvekutengesa uye zvekushandisa pamba
• makore mashanu-waranti
SKU: Isina Kubata Sabata Dispenser-2 Categories: zvishongedzo, Bathroom accessories Tags: Deck Yakatasva, Motion Switch, Isina Kubata Inopwanya Sipo